Wasara wasara, nguva haimiriri Friday, 14 June 2013 09:15	CHIPATA-PATA muZimbabwe. Vanhu vari kuti ngatichisvika kwamvurayacheka makumbo mwoyo iteramire, tironge ramangwana, nokuti upenyu hahudi kugara kuri kufungidzira Read more...
Japan yotarisa kuZimbabwe	Friday, 07 June 2013 07:16	neMunyori weKwayedzaMUSANGANO wechishanu weTokyo International Conference on Africa uyo waiitwa kuYokohama, Japan wakapera nemusi weChipiri svondo rino uyewo Zimbabwe iri kutarisirwa
Isu hatina daka nemunhu — Iran	Friday, 07 June 2013 07:11	naBlackmore Mavura HUSHAMWARI hwenyika yeIran neZimbabwe hucharamba huchisimbiswa sezvo nyika idzi dziine nhoroondo yakafanana inove yekubatirirwa nenyika dzekumadokero nekuda
Hunzenza manyanya: Ishe Mapanzure	Friday, 07 June 2013 07:00	naKingstone MapupuISHE Mapanzure vekuZvishavane vanoti vari kushushikana nekuda kwekuwanda kwevanhu, kunyanya madzimai, vari muwanano avo vari kuita gumbo-mumba gumbo-panze.
Tave kusvika kwamvura yacheka makumbo	Friday, 31 May 2013 05:54	CHAPERA, chapera musongorera wehuku. Rupawo rwakaiswa pabumbiro idzva remutemo svondo rakapera nemutungamiri wenyika President Mugabe rwakave Read more...
Mashura anotanga mberi	Thursday, 23 May 2013 09:07	VAKURU vanoti ukatsvaga makudo mugomo hauashayi. Vanotiwo zvakare, kunyange vamwe vanhu vachifungoti chero vataura, asi kazhinji-zhinji ndekokuti, muromo kapako kokuhwanda nako.
Bumbiro idzva romutemo riya	Thursday, 16 May 2013 10:05	Makorokoto, makorokoto, makorokoto!Aya ndiwo makorokoto!
Hapana chinoshamisira pakunyomba President Thursday, 09 May 2013 12:24	KANGOMA karirisi ndiko kaparuki. Pane vamwe vanhu vanotsvaga mbiri, nezvinhu zvisingape mbiri — mbiri yechitsiga. Chinonetsa ndechokuti kana muti watemwa kana kupiswa, chinozongosara chitsiga chete. Vanhu vanenge vongotaura kuti zvamunoona, apa paimbove nezimuti. Hongu raivepo, asi hapasisina, pangove nechitsiga chete. Read more...
Tsviriyo, tsviriyo, tsviriyo kumaelections!	Monday, 29 April 2013 13:08	MUIMBI womusambo wedzimbo dzamazuva ano aita mukurumbira anonzi Jah Prayzah anetsa nekachangobva kuburwa kanonzi “Tsviriyo”. Zvanzi itsviriyo yemiridzo. Panoridzwa miridzo kana mheterwa, panhu panenge pachifarwa kwete zvokutamba. Read more...
Madzimai muriko here uko?	Friday, 19 April 2013 11:49	NDIMI vana amai vakabereka, vana amai vakabikira kuti zuva ranhasi ratiri kupemberera makore 33 okuzvitonga kwakatandavara sorunyemba riveko. Aiwaka-a, makaita basa. Read more...
Vange vari mundege yamashangasu?	Friday, 05 April 2013 13:28	SESHOKO rorufu pane shoko raramba rotenderera pakati pedu. Kudoti chimbomirai kani, mozoti motaura, asi kwete, vave kutenge vanhu vasvikirwa kwazvo. Kutovatusva nokuti vari kuita makwikwi.
Kutendeuka ngakuve kwechokwadi	Thursday, 28 February 2013 10:49	MAVE kuenda ku“referendum” musi wa16 Kurume kwamuri kunovhotera bumbiro idzva romutemo. Mamiriro azvo zvinoratidza kuti mapato ose matatu anoti Zanu-PF, MDC-T neMDC-N vanenge vari kukurudzira vatsigiri vavo
« Start Prev 1 2 3 4 Next End »	Page 1 of 4	Search	Sponsored Links